yeyiphi umbala we-iphone 11 ekufuneka uyifumene?
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Nguwuphi umbala we-iPhone 11 ofanele ukuwufumana?
Nguwuphi umbala we-iPhone 11 ofanele ukuwufumana?
Ke, uthathe isigqibo sokufumana i-iPhone 11, 11 Pro, okanye iPro Max? Olu lukhetho oluhle! Kodwa ngaphambi kokuba uyithenge, kufuneka ukhethe umbala kwaye ekubeni ulapha, ngokucacileyo ujongene nengxaki. Ewe, silapha ukukunceda kukhetho lwakho kwaye ngethemba lokuba, ekupheleni kweli nqaku, ubuya kukhetha umbala owufunayo.
Inkqubo ye- Ifowuni ye-11 kwaye Iimodeli ze-iPhone 11 Pro sinokukhetha umbala okwahlukileyo ngokupheleleyo, ke siza kwahlula inqaku libe ngamacandelo amabini.
Ungatsiba uye ngqo kwicandelo le-iPhone 11 Pro / Pro Max kwikhonkco elingezantsi: Yeyiphi i-iPhone 11 Pro, umbala we-Pro Max oza kuyikhetha?
Nguwuphi umbala we-iPhone 11 oza kuwukhetha?
Ngaphambi kokuba singene kwizinto ezenza imibala ethile ikhetheke kwiimeko ezithile, kufuneka siqale sihlolisise ukhetho esijongene nalo.
I-iPhone 11 iza ngemibala e-6 eqaqambileyo kwaye ngokungafaniyo nabavelisi abaninzi be-smartphone abathanda ukunika imibala amagama anqabileyo anjenge-Illusion Sunset, iApple ibabiza nje injalo.
Imibala ye-Apple iPhone 11:
Kulungile, eyokugqibela yahlukile kancinci, siza kuthetha ngayo kancinci. Ngoku sele sizibonile, masidilize ukhetho lwakho.
Imibala eyahlukileyo ye-iPhone 11
Ngokwesiqhelo, yonke i-iPhone iza nombala omnye okanye umbala owahlukileyo okhethekileyo kuloo modeli. Kwaye i-iPhone 11 yahlukile. Kwimeko yayo, imibala mibini: eluhlaza kunye nemfusa. Zombini zithambile kwaye zicocekile ukuya kwindawo apho ukujonga kwi-iPhone yakho kuvakala ngathi amehlo akho ayacinezelwa. Kuya kufuneka siyinike iApple, imibala yayo ihlala ikwindawo.
Ukuchola omnye wale mibala kuyakunika ifowuni yakho isazisi ngakumbi kwaye kuyenze izive ikhethekile, kunzima njengaleyo xa uthetha ngee-iPhones. Le mibala mibini ikwangaphezulu kwendalo-y kunenye, ke ukuba uluhlobo lomntu oziva unxibelelwano olusondeleyo nomama woMhlaba, abo banokuthetha nawe kakhulu.
Icala elibi kukuba ukuba kamva ufuna ukuthengisa i-iPhone 11 yakho, kuya kufuneka ufumane omnye umntu othanda umbala owukhethileyo.
Imibala yeklasi ye-iPhone
Okumnyama nomhlophe yimibala emibini phantse yonke i-iPhone ingena. Oku kubenza ukuba baqheleke kakhulu kwaye ngokuqinisekileyo kuyadika. Nangona kunjalo, isibonelelo esinye esikhulu somnyama nomhlophe kukuba unokutshatisa ngokulula nokuba ngowuphi na umbala, ke awunakukhathazeka ukuba i-iPhone yakho iyangqubana nehempe, ilokhwe okanye ibhegi yakho.
Kuyinyani ngakumbi ukuba ufuna ukufumana imeko epholileyo ebonakalayo kunye nomfanekiso obalabala kuyo. Ngombala omnyama okanye omhlophe, uya kuhlala unendawo entle yangasemva, ngelixa ngokufanayo kungenakuthethwa ngayo nayiphi na eminye imibala ye-iPhone 11.
Ukubheja kumnyama okanye kumhlophe kukhetho olungenamngcipheko. Ukuba uluhlobo lomntu otshintsha izinto ozikhethayo ngokulula, khetha umntu omthandayo kwaye ulinge amatyala apha endleleni.
Ityheli 'yexabiso eliphantsi'
Ungasenzi gwenxa, siyayithanda imthubi kwii-iPhones. Iqaqambile, iyavuya kwaye ikhupha ii-vibes ezintle, yintoni ongayithandiyo? Nangona kunjalo, ukuza kuthi ga ngoku ivele kuphela kwii-iPhones ezazithathwa njenge 'ngexabiso eliphantsi'. Okokuqala, bekukho kwi-iPhone 5C, emva koko kwi-iPhone XR, zombini inguqulelo engabizi kakhulu kunamagama abo.
Ngosapho lwe-11 le-iPhone, u-Apple watshintsha izinto emva kokubona indlela ethandwa ngayo i-XR kwaye wabizwa ngokuba ngumlandeli wayo ngokulula i-iPhone 11, ukuzama ukunqanda nayiphi na indibaniselwano engazi nto kunye nento engaphantsi. Ke, ukuba uxhomekeke kwi-iPhone yakho ukuba isebenze kungekuphela nje njengefowuni kodwa kunye nophawu lwenqanaba, unokufuna ukunqanda ukufumana i-iPhone 11 emthubi.
Kodwa ukuba awukhathali ngayo nayiphi na loo nto, ke ngandlela zonke yiya kumbala otyheli, ukuba ngumbala wakho owuthandayo phakathi kwesithandathu.
I-RED ebomvu inesidima
Okokugqibela, kodwa kungaphelelanga apho, luphawu lwakwa-Apple olubhalwe uphawu (IMVELISO) umbala obomvu. Ngokungafaniyo nohlaza ocacileyo, omfusa kunye nomthubi, lo mbala uyamangalisa. Yintoni eyenza oku kubomvu kubomvu kukuba inxenye yemali oyichithayo kwi-iPhone 11 yakho iye ngqo kwiNgxowa-mali yeHlabathi ukulwa i-COVID-19.
Ngaphambi kokuba i-COVID-19 ibe yinto, (IMVELISO) I-RED inegalelo kuphando lomhlaza kwaye iya kuyenza kwakhona kwixesha elizayo.
Ewe ixabiso le (IMVELISO) iRED iPhone 11 ayiphezulu kunezinye, ke yiApple eyenza igalelo egameni lakho. Eli phulo liqhubeka iminyaka emininzi ngoku kwaye liyaziwa kakuhle, oko kuthetha ukuba abanye abantu baya kuqaphela ukuba ukhethe ukunceda injongo elungileyo ngokuthenga kwakho.
Ukujonga umbala ngokwawo kufanelekile, (IMVELISO) BOMVU ngumgqatswa ophambili wombala okhethiweyo we-iPhone 11.
Ngoku ukuba sigqibile kukhetho lwakho lombala, unokufuna ukukhangela ezethu Ezona meko zilungileyo ze-iPhone 11 ukufumana ukhuseleko kwifowuni entsha kraca. Sukulibala ukuqaphela a umkhuseli wesikrini nayo ngokunjalo.
Thenga iApple iPhone 11 ukusuka: Iapile: IAmazon: Eyona nto ithengwayo: Walmart Inguqulelo: AT & T.
Yeyiphi i-iPhone 11 Pro, umbala we-Pro Max oza kuyikhetha?
Ngemodeli ye-iPhone 11 Pro kunye ne-11 Pro Max, iApple iya kwimibala enzima ngakumbi kwiitoni ezantsi eziya kufaneleka kwimeko yeshishini. Ukhetha kwakhona kwimibala embalwa, ngekhe ubonakale ujikeleze umbala omthubi we-iPhone 11 Pro, hayi ukuba iApple inento ayithethayo ngayo.
Ke, yeyiphi imibala ye-iPhone 11 Pro esinokukhetha kuyo?
Nantsi ulungelelwaniso lombala we-iPhone 11 Pro kunye nePro Max:
Masikhe sizithathele ingqalelo!
Umbala owahlukileyo we-iPhone 11 Pro
Njengaku-iPhone 11, iApple inombala owahlukileyo wabasebenzisi bayo: Midnight Green. Ijongeka ngathi ingwevu ngombala oluhlaza kwaye inesuntswana lomkhosi wemikhosi kuyo.
I-11 Pro kunye ne-11 Pro Max sele ibonakale kakhulu kunye neekhamera zazo ezintathu kodwa i-Midnight Green iyicherry ephezulu ukuba ufuna ukwamkela ngokupheleleyo usapho lwe-11 Pro.
Kwicala elisezantsi, abantu abaninzi bathanda umbala ngesizathu esinye, esenza ukuba sithandwe kakhulu kwaye sinciphise ukwahluka. Kodwa ngemibala emine iyonke, awunakulindela ukuba ungayiboni ifowuni efana neyakho yonke imihla.
Imibala yokutshatisa iMacBook yakho
I-Apple ilunge kakhulu ekusebenziseni ulwimi olufanayo loyilo kuyo yonke imveliso yayo. Kwaye ukuba ujonge ukuthenga i-iPhone 11 Pro, kusenokwenzeka ukuba unazo ezimbalwa. Kwaye kwezona ziphumo zibalaseleyo zobuhle, kuya kufuneka ubhangqe iMacBook yakho nombala ofanelekileyo we-iPhone kwaye oko kuthetha ukukhetha phakathi kweGrey Space kunye neSilivere. Yindlela ekufanele ukuba ibe yiyo.
Le mibala yakudala iya kuqinisekisa kwakhona ukuba xa ukulungele ukwahlukana ne-iPhone 11 Pro yakho ukuze ufumane imodeli entsha, kuya kubakho abantu abayithathayo.
Imibala ye-iPhone 11 Pro yeGolide kwiRose Gold kodwa ayikho apho. Okwangoku, kuyongezwa ngokucacileyo kulungelelwaniso ukukholisa indawo enkulu ye-Apple's feminine userbase.
Umbala uhambelana neefowuni kakuhle, ezenza ukuba zibonakale ngathi zinobucwebe kangangoko kunokwenzeka. Ngelixa ezinye iindlela zisebenza ngakumbi, iGolide ikhwaza nje ubunewunewu. Kwaye ukuba yile nto uyikhangelayo, kulungile, uphumelele.
Ndiyathemba ukuba ngoku unoluvo olungcono lokuba ngowuphi umbala olungele wena, ngoku ukuba ufuna uncedo ekukhetheni ityala ngokunjalo, ungajonga eyethu Eyona meko iphambili ye-iPhone 11 Pro kunye nePro Max inqaku.
Thenga iApple iPhone 11 Pro ukusuka: Iapile: IAmazon: Eyona nto ithengwayo: Walmart Inguqulelo: AT & T.
Thenga i-Apple iPhone 11 Pro Max ukusuka: Iapile: IAmazon: Eyona nto ithengwayo: Walmart
Inguqulelo: AT & T.
Abaphehlebi abaphambili be-galaxy s6
I-samsung s20 fe eyintloko
Umhla wokukhutshwa kweWatchOS 8, amanqaku, kunye nokujonga kwangaphambili kokuhambelana kweApple
Uvavanyo lwe-Apple iPhone SE (2020)
Ngoku ungagcina iividiyo ezibukhoma kwi-Instagram ye-Android kunye ne-iOS, nantsi indlela esebenza ngayo
Uyicwangcisa njani iVPN kwi-iPhone
Ukuthelekisa i-Samsung Galaxy Note 4 kunye ne-Samsung Galaxy S5
Eyona iPhone 11, 11 Pro iimeko zebhetri
I-T-Mobile & apos; isixhobo sokuvula isixhobo siya kuvula ifowuni yakho, ukuba unale modeli inye
IJava thelekisa uLuhlu oluBini
Galaxy Note 10 kunye Qaphela 10+ amanqaku $ 200 ngezaphulelo kwi-Best Buy, kwitshaja yasimahla engenazingcingo ifakiwe
Ukuphononongwa kweHuawei 3 Pro Pro: Kubi ngeenxa zonke kwimiphetho